Ungayishintsha kanjani i-disc brake caliper - iShanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Ungashintsha kanjani i-disc brake caliper
Ngokuvamile, abakhipha amabhuleki bathembeke kakhulu, futhi badinga ukufaka esikhundleni kaningi kakhulu kunamaphakethe nama-disc, kepha uma kufanele ushintshe eyodwa, nansi indlela yokukwenza!
Kunezinto eziningi ezahlukahlukene zokubopha amabhuleki, kepha ezimweni eziningi, izimoto zifakwa izinsimbi ezihamba phambili ze-piston ezifakwa ngendlela efanayo. I-caliper ixhunywe kusithwali esixhunywe kwihabhu lemoto. Ngenkathi ungabuyisela amakhalitha ngawodwana ama-pads nama-disc ngaso sonke isikhathi adinga ukushintshwa ngamabili ngaphesheya kwe-ekseli.
Ungazami ukushintsha i-caliper ngaphandle kokuthi wazi ukuthi wenzani, noma unegunya lobuchwepheshe. Awukwazi ukuzibeka engcupheni nganoma iyiphi into yohlelo lwamabhuleki wemoto.
Vikela imoto ngokuphepha, usebenzise amatafula ama-asi kanye namasokisi wesondo, bese ususa umgwaqo. isondo.
Isithwali sivame ukuboshelwa kuhabhu ngamabhawodi amabili, lezi zingashiywa endaweni uma uguqula umshini wokushaya kuphela - kepha kuzodingeka ususwe uma ushintsha ne-disc.
Oyi-caliper uvikelekile kumphathi ngamabhawodi amabili, imvamisa enamakhanda ka-Allen, avikela izikhonkwane ezishelelayo emzimbeni koshayayo.
Ngokususa amabhawodi e-Allen uzokwazi ukuklonyela oshaya ngokucophelela kwi-disc. Kungaba yinkohliso ukususa, ngakho-ke qaphela uma usebenzisa i-pry bar.
Ngokukhishwa kwesigaxa amaphakethe azokhipha - avame ukugcinwa ngeziqeshana.
Ulayini wamabhuleki udinga ukususwa ngokucophelela ku-caliper. Uzodinga okokuthwebula ukuze ubambe noma yiluphi uketshezi lwamabhuleki oluzophuma (ungakutholi lokhu kupende).
Nge-caliper entsha qinisekisa ukuthi i-piston ibuyiselwa emuva ku-cylinder yayo ngamapayipi empompo wamanzi, i-G-clamp, noma efanayo. Ama-piston angemuva avame ukuba yizinhlobonhlobo 'zokubuyela emuva' futhi adinga ukubuyiselwa emuva kusilinda ngethuluzi lokubopha umoya. Lokhu kushibhile ukuthenga, futhi kulula ukuyisebenzisa.
Amapayipi angabe esethunyelwa ku-caliper (nganoma yiziphi iziqeshana ezidingekayo noma izikhonkwane) kanye ne-caliper egibele othwali.
Refit the caliper sliding bolts and check that they are in good order and slide smooth.
Spina ihabhu bese uqinisekisa ukuthi abakhongi batholakala kahle phezu kwediski, ngaphandle kokubopha (okunye ukubopha ukukhanya kulindelekile).
Ngawo wonke amabhawodi avikelekile i-hose brake hose idinga ukunamathiselwa futhi, no-caliper wopha ukuze asuse umoya.
Landela inqubo ejwayelekile yokopha (kungaba ngekhithi yegazi yomuntu oyedwa, noma ngosizo lomsizi, futhi uqiniseke ukuthi ugcina idamu lamanzi elibhidlikile lifinyelele ezingeni elifanele.
Hlola wonke amabhawodi ngaphambi kokufaka kabusha isondo nokufaka amabhawodi / amantongomane esondo ezingeni elibekiwe.
Yazi ukuthi i-pedal brake ingadinga 'amaphampu' amaningana ukuletha iphedi lixhumane ne-disc. Shayela ngokucophelela futhi uqinisekise ukuthi amabhuleki asebenza kahle.